Kushandira Maid, madhamu vakafa zvavo nehope! – VanodaZvinhu
Kushandira Maid, madhamu vakafa zvavo nehope!
by DrSviro · January 16, 2016
Pamba pangu tinogara namaid anotirerera mwana. Madam vangu vanoshanda, iniwo ndinoshanda. Maid wedu musikana akanaka akabatana, ini nemadzimai tinomufarira stereki nekuti anotibatira mwana zvakanaka plus anoshanda mumba achifara nguva dzose. Akangoitawo munyama wekushairwa mari yekuenda kuA level, nenjere dzainadzo aidai ari nurse kana teacher. Tinogarazve nemuzukuru wangu, nekuoma kwezvinhu mazuva ano basa riri kunetsa plus anekahunyope I think. But ndinofarira muzukuru wangu uyu nekuti anotibatsirawo mugarden uyezve kudoba-doba swimming pool.
Nyaya yakatangira pandaitaura nemuzukuru wangu madzimai vangu vasipo tichinyeya maid. Muzukuru wangu ange ati arikuda kusvira maid uyu saka aikumbira permission yangu sezvo aive mushandi wangu. Ndakaseka but takatanga zvedu kurumbidza maid zvechiboyz, tichiti hee anemagaro mahombe, mazamu achoo uum kunyatsoita round kunge maapples. Mumwe akati maybe anonaka zvisingaiti. Takenderera mberi tichingofantasaiza, muzukuru wangu akati paachamukwira achanakirwa zvekuoma gotsi chaizvo. Ini kwaakuti ndikamuwanikidza ndinomufendesa nayo nyoro. Taitaura kudai tiri panze kuseri kwegaraji but hatina kuziva kuti maid anga abudawo panze achinzwa tichumunyeya kudaro. Akazokosora hake tikabva tacheuka tikaona achinyemwerera nyemwerera semisi yose isu tika recover very fast tikangoseka-seka zvedu. Akabva ati breakfast rave ready huyai mudye.
Fastforwad a few days later maid akazoti kumuzukuru wangu “ndakanzwa zvamaitaura nababa vaT the other day. Varume vakuru mukwane nhaika. BabaT kuzoti vari kuda kundiisa nyoro kani…he he he zvino havambondigoni.” Muzukuru wangu akaseka akati ndonovaudza, maid akati “ehe vaudze.”
Tine open- plan kitchen. Saka paaibika mukitchen manheru acho madam vasati vadzoka kubasa hameno kuti chii chakatanga between maid nemuzukuru wangu. Vane havo system yekungonenedzerana kuita sevarumudzani saka handina kubatikana nezvaitaurwa. But then muzukuru wangu akabva ati ukadaro ndooudza sekuru zvawaswera uchitaura masikati vasipo, achisekerera senge benzi ranhonga bond coin mubhini. Maid akaseka obva ati vaudze, kuti kunyeba here, achinyaririra senge muroora awanikidzwa achiita weti natezvara. Ini ndakazobvunza kuti yaimbova nyaya yei ndipo pakanzi nemuzuruku wangu again nditaure here, maid akati taura havambondigoni. Ndopakatsemurirwa nyaya yose.
Ndichinzwa izvi ndakabva ndanzwa kuda kusvira maid wedu ipapo ipapo but obviously zvange zvisingaiti. Ndakasimuka ndonanga kukitchen kuye ndikamupuruzira magaro akatanga kufemera pamusoro. Nekazeveze ndakati zvino wadenha mago iye akati uum tototenda yanyora annoited pen yapastor achinditswinya neziso achinyemwerera. Mukadzi wangu akabva asvika, ini ndikadzoka zvangu musitting room ndichihwandisa mboro yange yaita senge ndadya mazondo anevhuka vhuka neKUMIRA.
Vhiki rose rakatevera racho handina kuwana mukana wekusvira maid, zvainetsa kuorganizer nenyaya yedeadline kugraft ndaishanda late. Anyways zvakazoti rimwe zuva ndakanonoka kupedza kugraft ndakazosvika kumba madzimai varara. Muzukuru wangu namaid vaiona tv musitting room. Maid akazosimuka kunondidziisira dinner ndokubva aakuti kune muzukuru wangu “iii sekuru vako is all talk. Kubva zviya nanhasi hapana zvavati vaita. Dai takaita bheji bheji ndatowina maRands or MaDollar so” Akabva akuseka zvechinhubu zviya. Ndakaziva kuti naiye aida mboro coz akaita yekudenha chaiko!
Ndakabva ndasimuka ndakananga kukitchen kwaange ari. Handina kutaura kana chinhu, ndakangosvika ndichitanga kumukisa ndichipuruzira magaro ake. Iye she kissed me back, mwana ane masoft lips haikona kutaura mhani. Apa ini mboro yangu yainge yaita sebvumbi ravhundutswa nebhinya. Akaswedera pandiri akagunzwa zimboro riye akavhunduka ndikanzwa oti maiwee! nepasipasi. Takaramba tichikisana kudaro kwekanguva ndikatanga kubata bata mazamu ake, apa nguva yose muzukuru akatarisa.
Ainge asina kupfeka braa and ane size yemazamu yandinofarira, size C and akanyatsomira kuti twii. Ndaibaiwa baiwa nawo pachipfuva zvichinyatsondipa dzungu nekutapirirwa. Akazoti muzukuru buda muno, muzukuru akati kwete, regai ndigare ndizonzwa mbuya kana mwana akamuka. It made sense, saka takasiya muzukuru achizoona show. Aive akagara musitting room maziso akati dhee senge bveni radya dafi.
Ndakabva ndabata beche ramaid nepaside pekaG-string wanikwei ratota zvisingaiti apa matinji kununira maihwe zvangu handichataura. Ndakambopuruzira beche, ndombotambisa tambisa matinji zvishoma zvishoma. Haana hake mazitinji mahombe hombe, saka zvakandifadza. Matinji mahombe anobhowa nekupedza energy mhani. Ndakaisa rumwe ruoko mublauzi ndokutambisa manipplez. Mwana akayuwirira uku achindikisa chete. Kiss dzake dzainge dzemufirimu, akanyatsovharira tumaziso kani, i think kuswera achioona masoap opera paTV kwaanoita or zvima Korean films zviya.
Pakange pasina time yekunotsvaga kondomu, ndakamuti akwidze gumbo one pamusoro pekitchen counter, ndikamufongoresa ndikabva ndapinza zimboro rangu zvine simba nehasha nepaside pekapanty kake ikako, ndobva ndaita zvekuisa chaiko about 5 or 5 times. Mwana akahwihwidza zvepasi pasi uku achiedza kutambisa machende angu. Pasina chinguvana gumbo rake rakatanga kubvunda bvunda achitunda ini ndichingokoira chete ndakabata magaro. Akaedza kuda kutambisa magaro back but akabva ashaya simba. Dr munongonzwa imi, Mboro yange yakazadza beche rese apa riri tight. Ndainyatsoona beche rese rakamedza mboro rakazara. Ini ndaiti ndikati yese bvoo, ndokoira koira ndomboburitsa ndodaro futi. Ndakazonzwa mwana zii ini ndichitambisa zvangu tumanipplies itwotwo nekupuruzira magaro uku mboro yakangonyura chete. Ndakachinja ndikazobata magaro nemaoko ose kwakutanga kuchikoira ndichirova macorners ese ebeche iya inonzi Heavy Attack yenyini. Mwana aive nemagaro ainyevenutsa moyo. Mboro yaibuda yakanyatsonunira nemajuices ebeche iye achingofemereka femereka semunhu arikubatwa ne Asthma Attack. Beche rainaka iroro apa rakati mbambamba kubatirira pamboro.
Ndakabva ndazonzwa kuti ndakuda kutunda ndikangoramba ndichikoira senge ndabatwa nemadhimoni seven eSVIRO iye achindikuzirira nepasi pasi. Ndazoona zvangu zvauya ndiye tsa tsa! tsa! tsa! kutunda ndichizadza beche. Maid akaramba achindipuruzira zvinyoro nyoro akazotendeuka ndokutangazve kundikisa zvine moto mukati.
Muzukuru wangu ndiye akazotivhundutsa oti imi chipedzai mhani munozowanikidzwa, plus maakundibhowa. Maid akazomhanyira kutoilet nekuti masperms ange akudzika negumbo…kkkk takamuseka. Akadzoka pave paya achiti i think stress yenyu babaT yambodzikira manje. Nanhasi ndikarangarira musi uyu mboro yangu inongoera yamira at attention semusoja akagadha president kucongress. Muzuru hameno kuti akazopihwawo here beche asi ini i know kuti once ndasvira ka1 its non stop unenge watotenga chikwambo chete… Hokoyo Maid ndosvira futi…
Dick size does matter: Advice from a Lady
by DrSviro · Published December 28, 2013
Ha video iyi ine nharo guys, Nude Music video in Zimba mufunge.
by DrSviro · Published August 15, 2013
Kusvikirwa naLandlord ndichichaya bonyora
by DrSviro · Published April 22, 2014
Next story Kusejusa kwandakaitwa na Bamkuru, sisi vasipo
Previous story Kubviswa humhandara naBamkuru